China Tayada Sare ee Robotic Arm Isticmaalka Warshada Slew Drive iyo soo saarayaasha |Wanda
Slew Drive waxay keentaa waxqabad la isku halayn karo oo dayactir la'aan ah ee codsiyada warshadaha.Waxa loo isticmaali karaa gacanta Robotic.Dhirta wax soo saarka iyo isticmaalka mashiinada warshadahawadida wax lagu dilos si loo xoojiyo dhaqdhaqaaqa oo loo xakameeyo qulqulka wareegtada.Qalabka makaanikada iyo roboticsku waxay ku tiirsan yihiinwadida wax lagu dilos meelaynta saxnaanta iyo waxqabadka joogtada ah.
ROboteiccududwaa qalab farsamo oo leh kalagoysyo laablaaban kara oo rogi kara.Waxa wada matoorro koronto oo kombuyuutarku maamulo.Qalabku waxa lagu rakibi karaa cidhifka gacmaha ee 'gacanta', kombayutarkana waxaa loo habeeyey si ay u qabtaan hawlo kala duwan, sida goynta, qodista, alxanka iyo rinjiyeynta.Waxa kale oo loo isticmaalaa hawlaha khatarta ah sida maaraynta walxaha shucaaca ama bambooyinka aan qarxin.
Naqshadeynta qaab dhismeedka iliga qaloocan, WEA Slewing Drive wuxuu leeyahay karti ka-hortagga daalka iyo isku-xidhka, kaas oo ku habboon hawl culus, codsiyada xawaaraha dhexdhexaadka ah, waxay ku habboon tahay codsiga Robotic Arm.
Waxaad arki kartaa buug-yaraha WEA Slewing drive.
Darawalku waa sanduuqa gearbox si badbaado leh u xajin kara culaysyada radial iyo axial, iyo sidoo kale gudbinta wareegga wareegga.Wareeggu wuxuu noqon karaa dhidib keliya, ama faasas badan oo wada jira.Dareewalada wax lagu liqo waxaa lagu sameeyaa qalabaynta, biraha, shaabadaynta, guriyaynta, matoorka iyo qaybaha kale ee caawinta oo lagu ururiyo sanduuqa marsho ee dhammaatay.
Wadaadka wax dilaya wuxuu isticmaalaa kinematics sax ah si uu u bixiyo qayb wayn oo hal-heer ah.Gawaarida iyo gearsyada waxaa la isugu geeyaa kiis yar, is-ku jira, oo diyaar u ah in la rakibo si loo wanaajiyo miisaanka iyo waxqabadka.Xuzhou Wanda slewing bearing co., Ltdwaayo aragnimo ahaandishay baabuursoo saaraha, waxaan awood u leenahay inaan ku bixino darawalada dilaaga ah oo tayo sare leh.
Hore: dhexroor weyn afar dhibcood xiriirka kubbadda robot
Xiga: giraanta wax lagu dhufto ee kubbadda safka ah oo leh qalab dibadda ah
wadida wax lagu dilo
Taxanaha WEA wuxuu dilay darawal
WEA14 Nooca culus ee wax lagu dilo ee loogu talagalay Cannon ceeryaamo